Akwa Fluffing Silicone emulsion Factory na Ahịa | Honneur
Ojiji: Fluffing silicone emulsion PR160 bụ ihe pụrụ iche nke ikuku silicone emulsion na ihe ndị bụ isi nke usoro ntanetị nke isingzụlite Agent maka akwa akwa. Enwere ike iji ya maka isingzụ, aringzụ Mma na Emnapụta cottoncha, T / C, polyester, naịlọn na akwa ndị jikọtara ọnụ. na-enye akwa dikwa mma, dị nro, dị larịị na voltaji na akwa. Enwere ike iji ya na flake emulsion n'ụzọ dịgasị iche iche dabere na ọnọdụ akwa.
Ọdịdị: mmiri mmiri ọcha
Ihe siri ike: 60%
Ionicity: abụghị ionic
Jiri: Fluffing silicone emulsion PR160 bụ ihe pụrụ iche nke ikuku nke silicone emulsion na isi ihe nke usoro ntinye .ZụliteOnye nnọchite anya maka akwa akwa. Enwere ike iji ya.Zụlite, Shearing & Emerizing na owu, T / C, polyester, naịlọn na akwa ya jikọtara ọnụ. na-enye akwa dikwa mma, dị nro, dị larịị na voltaji na akwa. Enwere ike iji ya na flake emulsion n'ụzọ dịgasị iche iche dabere na ọnọdụ akwa.
Emere akwa nwere akwa site na usoro ntinye, a na-akpọkwa ya ma ọ bụ brushing. A na-eji akwa ahịhịa ma ọ bụ akwa a na-eji ajị anụ ahụ eme ihe iji mepụta ahịrị dị nro. Ihe atụ ndị a ma ama gụnyere flannel, moleskin, na polar flea.
A na-eme fleece site na ịmịcha akwa polyester nke na-ebute ịba ụba ma guzobe akpa ikuku maka mkpuchi. Fleece na-enye ogo dị elu dị oke mma ma e jiri ya tụnyere Merino ajị ma ọ dị ala ma ọ bụ gbadaa gbadaa.
Napping bụ usoro nwere ike itinye n'ọrụ na owu, owu, sịmị siliki, na skun rayons, gụnyere ma ọ bụ ụdị na nke a kpakọtara ọnụ, iji bulie velvety soft, soft soft. Usoro a na-agafeta akwa ahụ na-agbanwe na clinịlin ndị nwere ọmarịcha eriri ndị na-ebuli eriri mkpụmkpụ mkpụmkpụ, na-adịkarị, site na weft, ruo elu, na-etolite akwa mmiri. Usoro a, nke na-abawanye ọkụ, na-etinyekarị ya na ajị ajị anụ na ajị ajị anụ na blanket.
Ọdịdị: Mmiri mmiri ara ehi na-acha ọcha
Ọdịnaya siri ike: 60%
Enweghị aha: abụghị ionic
Uru PH: 6 ~ 8
Ngwọta: soluble na mmiri
Njirimara na Ngwa:
1. Ezi ahụ dị nro, dị larịị, mmetụta na-efe efe, na-eme ka akwa ahụ na-eme ọfụma;
2. Ọ nwere obere mmetụta na ndò na agba, ọcha na ịdị ngwa na agba
3. Mgbe ịchichara ya, akwa ahụ dị larịị, gbakwunyere na-enweghị atụ, na-enweta mkpụmkpụ okpo, nke edo edo
4. Enwere ike iji ya na ọtụtụ n'ime ndị na - eji silicone softeners na ndị ọzọ na - enyere aka na akwa na otu akwa, zuru ebe niile
nke eji emecha
Ojiji na Usoro Ọgwụ:
N'ime ite ahụ, jiri mmiri ọkụ gbanye flake ahụ ma kpochaa ya kpamkpam. Mgbe ahụ, gbakwunye Fluffing
Silicone Emulsion n’usoro, kpachie ya n’uzo ma jiri ya mgbe iyochachara
1. Mpempe akwụkwọ akwa Polyester
Na-adịghị ike cationic flake 25kg, gbakwunye PR160 banyere 50kg, compound na 1000kg; Usoro onunu ogwu: 40-50 g / l
2. itkwà na-ete ube
Na-adịghị ike cationic flake 40kg, gbakwunye PR160 ihe dị ka 70kg, onyinye na 1000kg; Usoro onunu ogwu: 40-50 g / l
3. Ejiri akwa akwa T / C (80/20 ma ọ bụ 65/35)
Na-adịghị ike cationic flake 30kg, gbakwunye PR160 ihe dịka 70kg, onyinye na 1000kg; Usoro onunu ogwu: 40-50 g / l
4. DTY (Draw texting yarn) kpara akwa
Na-adịghị ike cationic flake 25kg, gbakwunye PR160 ihe dị ka 50kg, gbakwunye mgbochi silicone emulsion 10-20kg,
onyinye na 1000kg; Usoro onunu ogwu: 40-50 g / l;
Maka akwa dị ọcha, jiri flake na-abụghị ionic dochie flake na-adịghị ike
Mara: data dị n'elu bụ maka naanị aka, dabere na usoro ahụ
Ihe ngwugwu: Enyere ya na 200kg Drum ma ọ bụ 1000kg IBC
Shelkpụrụ nchekwa ndụ bụ ọnwa 12 site na ụbọchị mmepụta yana echekwara ya na mbụ ekpughere
akpa na 2℃~ 30℃. Biko rụtụ aka na nkwanye nchekwa na ụbọchị ngafe na
Nke gara aga: Siloxanes D4 D5 D6
Aringzụ Agwọ & Emeri; emelison silicone
Ihe ngbasa ozi ndi ozo
Nnukwu nnabata maka acid na preyes metallized